Umkhuleko kuZiqu-zintathu Ongcwele. ? Izimo Zothando, Ezinzima Neziphuthumayo.
11 Kufundwa iMin
Umkhuleko kuZiqu-zintathu Ongcwele ICatholic love, amacala anzima futhi aphuthumayo kanye nokuvikelwa kungenye yezinamandla kakhulu ngoba icela uYise, iNdodana noMoya oNgcwele ngokufanayo.
Izwi likaNkulunkulu lisikhombisa uNkulunkulu onguYise wezinto zonke, bese lisethula kuJesu Kristu onguNkulunkulu onguye uNkulunkulu owenziwe umuntu, wayephakathi kwethu wanikela ngokuphila kwakhe ngenxa yesintu, lapho esiya ezulwini wasishiya kuMoya Santo futhi manje singathembela kubo bobathathu.
UBaba neNdodana basezulwini futhi noMoya oNgcwele ushukuma ezinhliziyweni zethu njengomlilo.
ISonto lamaKhatholika lin uchungechunge lwe imithandazo eziqondiswe ikakhulukazi kwabathathu abahlangane, muniququ waphezulu.
Yimikhuleko ekhuphuka emacaleni ahlukahlukene lapho isandla somuntu futhi singakwazi ukusebenza khona-ke sincike emthandazweni ngoba isimangaliso sikaNkulunkulu esanele.
1 Umkhuleko kuZiqu-zintathu Ongcwele Ngubani uZiqu-zintathu Ongcwele?
1.1 Umkhuleko kuZiqu-zintathu Ongcwele
1.2 Umkhuleko kuZiqu-zintathu Ongcwele wothando
1.3 Umkhuleko kaZiqu-zintathu Ongcwele wamacala anzima futhi aphuthumayo
1.4 Kafushane ukuze kuvikelwe
Umkhuleko kuZiqu-zintathu Ongcwele Ngubani uZiqu-zintathu Ongcwele?
Ubumbano lukaYise; INdodana noMoya oNgcwele yilabo abakha uZiqu-zintathu Ongcwele.
Ukubonakala kwakhe bekuhamba kancane futhi siyakubona kulo lonke leli IBhayibheli.
Ekuqaleni, kulolofuzo uNkulunkulu ubonakala edala amazulu nomhlaba nakho konke okuphilayo.
Bese kuthi kumavangeli we ITestamente eNtsha sibona ukuthi uJesu Kristu uyeza, ezelwe yintombi yomsebenzi nangomusa kaMoya oNgcwele.
Lapho, siqala ukwazi impilo yonke yoMsindisi, lapho esefa, evusa futhi enyukela ezulwini, asishiyela isithembiso sikaMoya oNgcwele, kepha lokhu kwabonakaliswa kuphela emva kosuku osukwini lwePhentekhosti elandisiwe encwadini yezEnzo Abapostoli futhi uyaqhubeka nokusiphelezela kuze kube namuhla.
Onamandla amathathu sinikezwe thina yizicelo zenhliziyo zethu, lezo esivame ukuzenza zisuka emphefumulweni.
UZiqu-zintathu Ongcwele uhlala ekulungele ukusilalela.
Ngiyakudumisa, Holy Holy paraclito, ngoNkulunkulu wami neNkosi, futhi ngiyakubonga kakhulu ngayo yonke inkantolo yasezulwini egameni leNkosazana ebusisiwe, unkosikazi wakho onothando ngazo zonke izipho kanye namalungelo owamhlobisa ngawo, ikakhulukazi lowo ophelele naphezulu isisa oye wakhazimulisa inhliziyo yakhe engcwelengcwele futhi emsulwa esenzweni sokukhazimula kwakhe ezulwini; futhi ngokuzithoba ngicela kuwe egameni likaMfazi wakho omangalisayo, unginikeze umusa wokungithethelela zonke izono ezinkulu engizenzile kusukela ngomzuzu wokuqala engona ngawo; okwamanje, engilusizi kakhulu, ngenhloso yokufa kunokuphinda ngicasule Ubukhosi bakho baphezulu; futhi ngemfanelo ephakeme kakhulu nokuvikelwa okusebenzayo kukaMfazi wakho onothando olukhulu ngicela ukuthi ungiphe mina N. isipho esiyigugu kakhulu somusa wakho nothando lwaphezulu, unginike lezo zibani nosizo oluthile uMongameli wakho waphakade ahlele ngalo ukuthi ungisindise, futhi ungiholele ku yebo
Umkhuleko kaZiqu-zintathu Ongcwele inemiphumela esheshayo.
Umkhuleko, isikhali esinamandla esingesethu kuphela esikholwa emandleni eNkosi.
Ithuluzi elinamandla iSonto LamaKatolika elazi ukuthi lisetshenziswe kanjani futhi okusishiyela imodeli, isibonelo ukuze sazi ukuthi singabuza kanjani, sisebenzise maphi amagama.
Umkhuleko akukubi, bayithuba lokuthi bajwayele ukuthandaza, bafunde ukuthandaza ngendlela eyiyo, yingakho imithandazo ikhona ukuze isihole lapho siqhubeka.
Umkhuleko kuZiqu-zintathu Ongcwele wothando
Ngegama likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele, Amen.
UZiqu-zintathu Ongcwele, isiqalo nesiphetho sami, amandla ami nokuvikelwa kwami ​​nosizo lwami lwaphezulu, ohlala enhliziyweni yami futhi okhona emphefumulweni wami futhi emboza ubuntu bami bonke.
Ubusisiwe ongu-Tixo oNgcwele, ofanelwe lonke udumo, inkazimulo nodumo, ngikholelwa emandleni Akho, uNkulunkulu uYise, uNkulunkulu iNdodana, uNkulunkulu uMoya oNgcwele.
Ngiyethemba ngokungazethembi izipho zakho futhi nginethemba Kuwe, futhi ithemba lami nokupha ngibeka ezandleni zakho, ngisize ukukhulisa ukholo lwami futhi nsuku zonke nothando lwakho makube ngumuntu ongcono futhi uvuke ugcwele isikhuthazo nomdlandla.
Nkulunkulu obusisiwe, uwena umthombo osuka kuwo uthando nokuphila, owasidala ngokomfanekiso wakho nangobuntu bakho, nokuthi ngenxa yothando lwakho wathumela uNkulunkulu iNdodana ukuze ngempilo yakhe isihlenge futhi isisindise esonweni, ngi ...
(Isho igama lakho)
Ngikunika futhi ngingcwelise konke okuhlala ebuntwini bami futhi ngiyaxolisa kakhulu ngicela ungithethelele ngawo wonke amaphutha engiwenzile nezono engizenzile kuze kube namuhla futhi ezihlukanisa nami.
Utatu Oyingcwele, ngicela ungihawukele, unginike usizo lwakho, ukuze umphefumulo wami ugcwale ukuthula, ungiguqule ngibe umuntu onesineke, onomfutho, othobekile futhi ogqokile womusa wakho.
UMoya oNgcwele oBusisekile, ongumthombo wayo yonke induduzo, ngicela ukuthi ucebise umphefumulo wami ngobuningi bezipho zakho.
Uyithemba lami nesihlangu sami ezimpini zami, ungamandla ami ekuhluphekeni nasekukhathazekeni.
Ngalesi sizathu ngiza emadolweni ami phambi Kwakho ukuzocela ukuthi ucele isandla sakho ungisize futhi ungikhulumele phambi kukaNkulunkulu uBaba ukuthola usizo lwakhe ngokushesha.
UMoya oNgcwele waseZulwini, uvuselele amandla ami futhi ukhuphule isibindi sami sokuqhubeka le mpi engibhekene nayo, ngicela uncike indlebe yakho maqondana nokunxusa kwami ​​unginike engikufisayo futhi ngikubuze kulolu suku.
Ngiyacela ukhanyise enhliziyweni yami uthando lukaNkulunkulu olukhanyisela izinhliziyo zabalandeli bakho abathembekile. Ngothando lwakho, Amandla noMusa ngicela ungikhulule kulo lonke usizi, futhi ukuthi akukho okuphazamisa ukuthula kwami ​​noma kungenze ngihlupheke.
Utatu Oyingcwele, ngiza ngokuzethemba ngokuphelele Kuwe, nangayo yonke inkolelo yomphefumulo wami, ukuze ukwazi ukunciphisa usizi olungibangela ukuhlupheka okukhulu, ngicela ungiphilise amanxeba enhliziyo yami futhi ungithululele isihawu sakho nami futhi engikudinga kakhulu ukuphuthuma:
(Tshela uZiqu-zintathu Ongcwele okudingayo ngokuphuthumayo futhi ucele usizo lwabo olukhazimulayo)
Nkulunkulu Baba, ngiyabonga ngoba ulalele imithandazo yami, nothando lwakho infinito, nangokuphepha uthando lwakho olunginika kona, okungivikelayo futhi kungiduduze.
Ngiyacela ukuthi ungisize, Utatu Oyingcwele, ngiyakucela ukuthi uthandazelwe futhi uzuze iNdodakazi Ezibusisiwe uMariya, Umama kaJesu kanye nomama wethu.
Ngabe uwuthandile umthandazi oNgcwele kaThando?
Uthando luhlala luyinjini yemikhuleko yethu, noma ngabe lusishukumisela ukuthi sicele abanye noma sicela uthando lokuwela indlela yethu.
Noma ngabe yikuphi, into ebalulekile ukucela ngokusuka enhliziyweni, kusuka emphefumulweni kanye nokukholwa okuningi.
Okwenza ukuthi imithandazo yethu ibe namandla futhi sithole izimpendulo ukuthi sikholwa ukuthi lokho esikucelayo kungavunyelwa.
Ukucela uthando, ukuze sazi ukuthi singalukhomba kanjani ngesikhathi sinqamula indlela yethu kubaluleke kakhulu ngoba izwi likaNkulunkulu lifundisa ukuthi inhliziyo iyakhohlisa futhi ingasenza sikholelwe ukuthi sithola uthando lapho lungekho.
Kungakho ukuqondiswa kukaZiqu-zintathu Ongcwele cishe kuyisenzo sokuphila nokufa.
Umkhuleko kaZiqu-zintathu Ongcwele wamacala anzima futhi aphuthumayo
UZiqu-zintathu Ongcwele, uNkulunkulu Oziqu Zithathu futhi Oyedwa, uYise, iNdodana noMoya oNgcwele, isiqalo nesiphetho sethu, wakhothama phambi Kwakho ngiyakhokha inkokhiso: ubusisiwe futhi udunyisiwe makube uBathathu Emnye Oyingcwele! Kuwe, zintathu ezingcwele makube udumo, inkazimulo nodumo lwaphakade, ngikholelwa kuwe ngenhliziyo yonke kuwe futhi umuntu wakho ozinikela ethembekile ufisa ukuba njalo, ngiza kuWe ngokuzethemba okuphelele ukubuza ukuthi ungahlala ukhulule ebubini futhi nakubo bonke ubunzima nezingozi, futhi ezidingweni zami, ngiyakuncenga, ungiphe umusa wakho.
Ubaba wezulu, umelusi omuhle kaJesu, umoya oNgcwele, ngiyakuncenga ngokuncenga kanye nokufanelwa yintombi ebusisiweyo uMariya, unginike usizo lwakho, ukuholwa kanye nokuvikelwa kwakho kukho konke nokukhathazeka ngempilo yami.
Udumo Kuwe uNkulunkulu uYise, umthombo wokuhle nokuhlakanipha kwaphakade, impilo ivela kuwe, uthando luvela kuwe, yenza yonke imzuzu ukusebenza ngokulunga nobuhlakani ukujabulela izimpahla nokududuza ongithumelela kona; khumbula ukuthi ngiyingane yakho, futhi ngihawukele ukuhlupheka kwami, izidingo zami unginike usizo kulesi simo esinzima:
(buza ngokholo olukhulu lokho ofuna ukukufeza)
Ngiyabonga, Baba onesihe ngokuba lapho.
Udumo kuWe Ndodana kaBaba waseZulwini onhliziyo yakhe Engcwele ithola isiphephelo, ungifundise ukulingisa impilo yakho nobuhle bakho, nginikeze ukuqina nokubekezela ukuze ngifeze izimfundiso zakho ungenze ngenze imisebenzi yesihawu sokusebenza kaningi, ungangilahli ukuhlupheka kwansuku zonke, ngikhulule ekubophweni isitha esinakho kimi, kungisuse futhi kungivikele kukho konke ukungiphazamisa okunginikeza usizo lwakho oluyisimangaliso kule nkinga: (phinda isicelo ngethemba elikhulu).
Ngiyabonga Jesu wami omuhle ngokuba eceleni kwami ​​ezikhathini zokuphelelwa yithemba nosizi.
Udumo kuwe Moya oNgcwele, ukucaciseleka okukhanyisela konke, nokuthi uyinenjabulo, ukuvumelana nenjabulo yendalo, kwenze njalo kube ngukuphefumulelwa ukuphefumlelwa kwakho okungaphezulu kunginike ukuthula, nginike usizo ekusweleni nasezinkingeni zami futhi unginike usizo lwakho ukuze ngikwazi ukufeza engikudinga kakhulu njengamanje.
Ngiyabonga umoya waphezulu wothando ngokungisiza lapho konke kumnyama futhi ngidinga ukukhanya.
Umama wami neNdlovukazi, Lady of the Skyies Wena osondele kakhulu kuZiqu-zintathu Ongcwele ungithandazeleni kanye nezinkinga zami kanye nokushoda kwami, yiba Ngummeli wami nengxenye ukuze ukunxusa kwami ​​kube khona, ngenze ngithole isimangaliso esinembe kakhulu ku impilo yami
Ngiyabonga Umama wami othandekayo, Ubusisiwe weNkosazana uMariya, ngokuqonda kakhulu futhi ubenakekela izidingo zethu njalo.
UZiqu-zintathu Ongcwele, uBaba, iNdodana noMoya oNgcwele, nginikeze isihawu sakho, ungiphe umusa wakho futhi unginike isixazululo esisheshayo osizini nasekukhathazekeni kwami.
Ubaba, iNdodana noMoya oNgcwele, Ubusisiwe futhi Ungcwele Ongcwele, ngiyakuthanda, ngiyakuthanda futhi ngiyakunika ubuntu bami.
O Utatu Wothando, uNkulunkulu onesihawu, ngiyazincama eNtandweni yakho yaphezulu, ngoba izikhathi zakho ziphelele futhi Nguwe kuphela owaziyo okungcono kimi, Inkazimulo kuYise, Inkazimulo kwiNdodana, Inkazimulo kuMoya oNgcwele, inkazimulo kuBusisiwe nongaphumelelanga ITrinidad, njengoba yayinjalo ekuqaleni, manje naphakade, phakade naphakade.
Lawo macala lapho kungekho lutho olungenziwa ngabantu esingalwenza.
Lawo macala lapho asinikeze khona ukuxilongwa kwezokwelapha, lapho ilungu lomndeni selinyamalale, lapho ingane idinga usizo lukaNkulunkulu futhi ingalazi noma ingafuni ukuyicela, ukuhlupheka, izinhlungu, ukungabi namandla, ukungabi nampilo kanye nezimo ezithile kanye nemizwelo okusenza sifune kakhulu kukhona lapho isandla esinamandla sikaNkulunkulu sihamba ngamandla.
Umkhuleko kaZiqu-zintathu Ongcwele ungasisiza kungekudala phakathi kwezinkinga ezinzima kakhulu ukuzixazulula.
Konke kuyisenzo sokukholwa nokuthembela eNkosini, sikholelwa ukuthi ulawula zonke izinto nokuthi uyakwazi akwenzayo.
Kafushane ukuze kuvikelwe
Ngiyakubona futhi ngiyakudumisa, Wena OyiNkosazana Engcwelengcwele, INdlovukazi yezulu, iNenekazi kanye noMkhululi womhlaba, njengoNdodakazi kaYise ongapheliyo, Umama weNdodana yakhe ethandekayo, noMfazi Othandekayo Womoya Ongcwele; futhi waguqa ezinyaweni zobukhosi bakho obukhulu ngokuzithoba okukhulu, ngiyakucela kulowo mnikelo waphezulu; ukuthi wawugcwele kakhulu kuMcabango wakho wokuya ezulwini, ukuthi ungenzela umusa nesihe esiyingqayizivele sokungibeka ngaphansi kwesivikelo sakho esiphephe kakhulu nesethembeke kakhulu, nokungamukela isibalo salezo zinceku ezijabule kakhulu nezinenhlanhla ozishaye esifubeni sakho sobuntombi.
Zihloniphise, oh Umama neNkosikazi yami enomusa kakhulu, ukwamukela inhliziyo yami edabukisayo, inkumbulo yami, intando yami, namanye amandla angaphakathi nawangaphandle nemizwa yami; Yamukela amehlo ami, izindlebe zami, umlomo wami, izandla zami nezinyawo zami, zibuse ngokwamukelwa yiNdodana yakho, ukuze ngayo yonke iminyakazo yayo ihlose ukukunika inkazimulo engapheli.
Futhi ngenxa yalokho kuhlakanipha iNdodana yakho ethandekayo ekukhanyisele ngakho, ngiyakuncenga futhi ngicela ungifikise ukukhanya nokucaca ukuze ngizazi kahle, ukungabi nalutho, futhi ikakhulukazi izono zami, ukuzizonda nokuzenyanya ngaso sonke isikhathi, futhi futhi nokufika kimi ukukhanya ukuze ngazi izingibe yesitha esingamabomu kanye nokulwa okufihliwe nokubonakalayo.
Ikakhulu, Mama ohlonipha uNkulunkulu, ngicela umusa wakho ... (khuluma).
Lokhu umkhuleko oyisimangaliso U-Ala Santísima Trinidad ukucela impilo yethu, ukuvikelwa nokuchuma kwethu kunamandla kakhulu!
Isivikele, iyasinakekela y usihole ukwenza kuphela okuyintando kaNkulunkulu. Singacela ukuvikelwa thina noma nomndeni wethu nabangane.
Khumbula ukuthi wonke lawo mandla amahle avela kithi evela kuyo yonke into ezungezile.
Akukho lutho uZiqu-zintathu wobuNkulunkulu ongeke wasivikela kulo, ayikho into enamandla noma enamandla ukwedlula uNkulunkulu, yingakho sithemba ukuthi nguyena osinakekelayo nathi noma ngabe bakuphi.
Ungakhuleka noma nini lapho ufuna.
Umkhuleko kuZiqu-zintathu Ongcwele awunalo usuku, ihora noma umzuzu ofanele.
Kufanele sithandaze lapho sifuna ukuthandaza. Kufanele sibe nokukholwa futhi ngaso sonke isikhathi sikholwe ukuthi konke kuhamba kahle.